Ma waxaad raadineysaa daroogo xoojineysa oo wax ku ool ah oo wax ku ool ah oo kaa caawin karta inaad lumiso dufanka isla markaana aad yeelato murqo isla waqtigaas? ma waxaa rabtaa iibso SARMs (qaabeeyeyaasha xasaasiyadeed ee xaddidan iyo kuwa xaddidan) ee gacmahaaga ka dhigaya kuwo aan awood u lahayn inay qabtaan biceps culus iyo triceps? Haddii jawaabahaagu ay yihiin xaqiiqo, waxa kaliya ee aad u baahan tahay waa inaad iibso Ostarine sharci ah ama MK-2866 laga bilaabo Shaybaarada jirka lagu dhiso - soo saaraha ugu jecel adduunka iyo jumladlaha kuwa ugu fiican ee wax ka beddelaya istiraatiijiyeyaasha xasaasiyadeed, isugeynta tababarka, iyo saliidaha CBD. Ostarine, oo sidoo kale loo yaqaan 'Ostabolic', waa wax kale laakiin waa beddelka dhabta ah ee ciyaarta marka ay timaaddo xirmidda muruqyada awoodda badan waqtiga ugu dhaqsaha badan.
Waa Maxay Cudurka Osteoporosis?
Asal ahaan waxaa loo sameeyay si loo daaweeyo laf-dhabarka, Ostarine wuxuu bilaabay inuu caan ku noqdo xaaladaha kale ee daran sida murqaha oo luma iyo sida xulashada ugu horeysa ee ah daaweynta daaweynta beddelka testosterone ee bukaanada la halgamaya heerarka testosterone ee hooseeya. Waxay dhakhso u noqotay mid ka mid ah daawooyinka jirka lagu raadsado sababta oo ah faa'iidooyinkeeda cajiibka ah.
Daawadani jimicsiga waa midda labaad marka laga hadlayo helitaanka natiijooyinka SARMs sida kororka weyn ee heerarka muruqyada, cabirka muruqyada, qeexidda muruqyada, adkeysiga, iyo awoodda wax looga qabanayo jimicsiga daran iyo fadhiyada wadnaha. Adoo adeegsanaya SARM-kan sharciga ah muddo 10 illaa 145 toddobaad ah, dadka jecel jirdhiska waxay filan karaan inay si daran u garaacaan, u shaqeeyaan muddo dheer, u ordaan si dhakhso leh, oo ay kor u kacaan iyaga oo aan la kulmin calaamadaha daalka.
Waxa xiisaha lihi, Ostarine waa mid ka mid ah kuwa aadka u yar ee SARMs UK ah oo kaa caawin kara inaad hesho murqaha oo aad lumiso dufanka caloosha iyo caloosha ee madax adag isla waqtigaas. Intaa waxaa sii dheer, waxay leedahay awood ay si weyn kor ugu qaaddo awoodda jidhka bini'aadamka si ay u kororto haynta nitrogen iyo isugeynta borotiinka taasi waa waxyaabaha aasaasiga u ah dhismaha murqaha. Isticmaalka MK-2866 sidoo kale waxay la xiriirtaa horumarinno la yaab leh oo kor u qaadista xoogga iyo adkeysiga.
Tan kaliya ma aha, waxay ka caawineysaa cayaaraha iyo jir-dhiseyaashu inay isticmaalaan kalooriyo ka badan inta la cuno si loo gubo dufanka badan. Ostarine sidoo kale waa ku qanacsan yihiin jimicsiyada iyo bulshooyinka dhiska maadaama aysan u rogin Dihydrotestosterone (DHT) ama estrogen. Tani waxay ka dhigan tahay in ciyaartooyda, jir dhiseyaasha, iyo dadka kale ee isticmaala Ostarine aysan ka walwalin DHT iyo saameynaha estrogenic sida timo luminta, maqaarka dufanka leh, finanka, finanka dumarka, iyo yaraanshaha qanjirka 'prostate'.
Ostarine waa daroogo la yaab leh markay tahay kordhinta waxqabadka jimicsiga iyo helitaanka qiimaha ugu fiican ee tababarka iska caabinta, tababarka xoogga, iyo jimicsiga jimicsiga, iyo kalfadhiyada wadnaha.
Culeyska muruqyada ee aan isku mid ahayn iyo guulaha cabbirka
Macaashka wareegga ee muddada dheer soconaya oo sahlan
Dufanka jidhka ka dhin oo murqahaagu isku mar kaydin
Waxay dhiirrigelisaa istaandarka, xididdada dhiigga, iyo guulaha xoogga
Kordhi jimicsigaaga jirka iyo fadhiyada wadnaha
Waxay kaa caawineysaa inaad ka gudubto tababarka plateaus
Soo kabasho dhakhso leh inta udhaxeysa jimicsiga
Ugufiican daaweynta muruqyada, soo kabashada, iyo dib u dhiska
Waxay kordhisaa murqaha oo buuxa iyo bambooyin
Waxay yareysaa xanuunka ka dib jimicsiga
Qiyaasta Ostarine ee Ragga
Ostarine waxaa sida ugu wanaagsan u adeegsada ragga wareegga Ostarine SARM ee 10 illaa 14 toddobaad qiyaasta maalinlaha ah ee 15-25mg kaas oo ugu wanaagsan ee lagu qaato laba qiyaasood oo isku mid ah, mid subaxdii iyo mid fiidkii ah. Isticmaalka Ostarine waa in la doorbido cuntada kadib iyo 30-40 daqiiqo kahor jimicsiga. Waxaa muhiim ah in halkan la ogaado in nolosha nuska ah ee Ostarine ay qiyaastii tahay 20-24 saacadood sidaa darteedna xitaa hal mar maalintii qaadashada waa la aqbali karaa.
Isticmaalka daroogada jirka dhista ee Ostarine UK waa in loo sameeyaa oo kaliya ujeedooyin sharci ah iyo daawo kadib isticmaalkeeda kadib markii la ansixiyay qiimeyn dhameystiran ee taariikhda caafimaadka iyo warbixinada dhaqtar caafimaad oo diiwaangashan Qiyaasta daawada 'Ostarine' waa in aan waligood lagu xadgudbin iyadoo laga rajo qabo natiijooyin deg deg ah. Tani waa sababta oo ah xadgudubka ama xad dhaafka ah ee daroogo kasta waxay noqon kartaa mid khatar ah oo xitaa dilaa ah oo sharci ah Ostarine ma aha mid ka reeban.
Qiyaasta Ostarine ee Haweenka
Dumarka isticmaala, qiyaasta lagu taliyey ee Ostarine waa 5-10mg maalin kasta, iyadoo la doorbidayo in la qaato cuntada ka dib iyo 30-40 daqiiqo kahor jimicsiga. Dumarka isticmaala Ostarine waxay qaadan karaan waxqabadkan waxqabadka leh ee SARMs UK laba jeer maalintii (laba qaadasho oo isku mid ah iyo qaybsan, hal mar subaxdii iyo hal fiidkii). Waxaa muhiim ah in la ogaado halkan in xalaasha MK-2866 aan lagula talin naasnuujinta ama haweenka uurka leh. Isticmaalka Ostarine marwalba waa in loo sameeyaa ujeedooyin sharci iyo dawo waana marka dhaqtarka diiwaangashan uu ogolaado isticmaalkiisa ka dib marka la qiimeeyo dhammaan warbixinnada caafimaadka iyo taariikhda.
Maxay uga iibsaneysaa Sheybaarro sharciyeysan Sheybaarada Jir dhiska ah?
Ostarine ayaa sidoo kale loo arkaa inay tahay xulasho aad u wanaagsan oo loogu talagalay dib-u-dhiska daalka muruqyada iyo muruqyada oo ay soo mareen aqlabiyad badan oo ka mid ah xoog-wadeyaasha, jir-dhiseyaasha, iyo xoogagga cayaaraha ka dib wareegyo adag oo jimicsi, tababar xoog leh, iyo wadnaha fadhiyada.
Waxa ugu fiican ee ku saabsan sharci ah MK-2866 ka Shaybaarada jirka lagu dhiso waa inaysan jirin wax khasaaro ah marka la eego muruqyada, xoogga, ama adkeysiga marka Ostarine uu bilaabo inuu muujiyo astaamaha dufanka. Tani waa mid ka mid ah sababaha ugu waaweyn ee dadka isticmaala Ostarine u dareemaan nolol cusub, xamaasad leh, oo awood leh sida Xayawaanka inta lagu jiro iyo ka dib wareegga 'Ostarine SARMs'. Marka lagu daro faa'iidooyinkaas kala duwan, Ostabolic wuxuu si siman waxtar ugu leeyahay hagaajinta, dayactirka, iyo bogsiinta caafimaadka kala-goysyada. Haddii taasi aysan ahayn oo dhan, isticmaaleyaasha Ostarine waxay filan karaan inay si fudud u ilaashadaan una ilaashadaan guulaha isdaba jooga ah ee lagu sameeyay SARM-kan sharciga ah, muddo dheer ka dib markii Ostarine-ka ay doorteen wareegga qaabeeyaha xasaasiyadeed ee xaddidan.
Ostarine, Taageerada On-Cycle, Iyo PCT
Taageerada wareegga waa gebi ahaanba waa inuu jecel yahay daaweynta wareegga dambe ee wareegga 'Ostarine bulking cycle' iyo sidoo kale wareegga goynta 'Ostarine'. The Shaybaarada Jir-dhismeedka ah ee loo yaqaan 'SARMs Cycle Support 90 Capsules' ayaa kuu noqon doonta xulashada ugu fiican adiga marka ay timaado taageerada SARM ee wareegga wareegga. Kaabashka oo ka kooban maaddooyin aamin ah iyo kuwa dabiici ah, kaabsoolladani waxay muujinayaan waxtarka iyo awoodda aan la barbar dhigi karin si looga hortago caabuqa unugyada iyo dhaawaca. Waxay sidoo kale wax ku ool u yihiin ilaalinta jirka ka hortagga buufiska oksida iyo hagaajinta heerarka shaqada kelyaha, xoogga lafaha, iyo isku-dhafka kolajka.
Shaybaarka Jir-dhiska ee 'SARMs Cycle Support' ayaa ka caawiya qanjirka 'prostate', cadaadiska dhiigga, kolestaroolka, iyo taageerada beerka. Waxaa muhiim ah in halkan lagu xasuusto in jidhku qaadanayo cadaadis dheeri ah inta lagu jiro waxqabadka kor u qaadista wareegga daroogada ee xubnaha. Natiijo ahaan, jidhku wuxuu kordhiyaa heerarka kolestaroolka iyo cadaadiska dhiigga ee guud ahaan hoos u dhaca marka wareegga la dhammeeyo. Si kastaba ha noqotee, kaabis awood leh oo awood leh oo wareegga wareegga ah sida Shaybaarada Jir-dhiska ee 'SARMs Cycle Support' ayaa jidhka ka caawin kara inuu wax ka qabto cadaadisyadan inta lagu jiro wareegga PED laftiisa. Waxaa ugu fiican in la qaato 3 kaabsol (hal mar subaxdii cuntada kadib, hal galab kadib cuntada, iyo hal jeer fiidkii kadib cuntada) Shaybaarada Jir-dhiska ee loo yaqaan 'SARMs Cycle Support' maalin kasta. Taageerada wareegga wareegga ayaa sida ugu fiican u bilaabata ka dib 4-5 toddobaad ee wareegga SARMs.
Daaweynta wareegga dambe waa qayb muhiim ah wareeg kasta oo SARM ah iyo wareegga 'Ostarine bulking cycle' ama wareegga goynta 'Ostarine' ma noqon doono mid ka duwan. Waxaa habboon in la xusuusto in jirkaagu u janjeero inuu ku sii socdo kantaroolka markabka inta lagu jiro wareegga SARM waxaana laga yaabaa inuu joojiyo soo saarista hormoonnada si dabiici ah. Tani waa sababta ugu weyn ee aad xoogga ugu saareyso daaweynta wareegga saxda ah ee saxda ah ka dib wareegga 'Ostarine SARMs'. Ujeedada koowaad ee PCT waa in jirka dib loogu soo celiyo sidii uu ahaa si markaa wax soo saarka dabiiciga ah ee hormoonku dib ugu soo noqdo ugu horreyntii.
Waxaad ka heli kartaa boqollaal iyo kumanaan daroogada PCT laakiin markay tahay caafimaadkaaga, ma jiri karo wax tanaasul ah. Tani waa sababta ay jimicsiga jirka iyo jimicsiga u jecel yihiin Ostarine muruqyadooda kor u qaadista iyo yareynta dufanka ee awoodaha ay ku talinayaan Shaybaarada jirka lagu sameeyo ee loo yaqaan 'SARMs PCT 90 Capsules'. Ma is weydiisay sababta?
Shaybaarada Jir-dhiska ee 'SARMs' PCT 90 Capsules waxay si weyn u soo celiyaan una xoojiyaan wax soo saarka dabiiciga ah ee testosterone, gaar ahaan marka lagu daro tababarka iska caabinta Kaabsooshahan, oo ay ku jiraan maaddooyinka dabiiciga ah iyo kuwa aaminka ah sida Tribulus Terrestris Extract iyo Saw Palmetto Extract, ayaa si isku mid ah waxtar u leh si loo yareeyo dhaawaca muruqyada ee jimicsiga iyo hagaajinta xuduudaha, libido, iyo dhalmo la'aanta.
Inta lagu jiro wareegga 'Ostarine SARMs', waxaad si fudud u qaadan kartaa 3 kaabsul (hal mar subaxdii cuntada kadib, hal galabtii cuntada kadib, iyo hal jeer fiidkii kadib cuntada) maalin ka mid ah Shaybaarada Jir-dhiska ee 'SARMs PCT 90 Capsules'. Waa wax fudud sida in! Xusuusnow, PCT wuxuu sifiican u bilaabmaa isla markiiba ama usbuuc ama laba kadib wareegga SARM-ka.
Ostarine Iyo Sargaal
Ostarine ayaa sida ugu fiican loogu dhejiyay GW-501516 iyo S-4 inta lagu jiro wareegga jarista SARMs. Wareegtani waxay noqon doontaa ikhtiyaar la yaab leh haddii ujeeddadaadu tahay inaad lumiso dufanka jirka ee culus iyo miisaanka intaad xirxireyso muruqyada adag. Intaa waxaa sii dheer, waxaad filan kartaa horumarin la yaab leh oo ku saabsan heerarka dulqaadashada wadnaha, awoodda aad u leedahay inaad wax ka qabato jimicsiyada culus, iyo inaad horumariso natiijooyinkaaga jimicsiga. Wareegga wareegga SARMs, Ostarine waa lagu dhejin karaa LGD-4033, Nutrabol (MK-677), Stenabolic (SR-9009), RAD-140 (Tijaabin), iyo GW-501516 si ay ula kulmaan guulaha wareegga sida guulaha muhiimka ah ee heerarka kor u qaadista waxqabadka, xoogga, murqaha, qeexida murqaha, iyo awooda lagu maareeyo kal-fadhiyada wadnaha iyo jimicsiga jirka.
Sidee loo iibsadaa Ostarine sharciyeysan?
Waxaa jira dad badan oo waxsoosaarayaasha SARM-yada ah iyo kuwa wax iibiya halkaan laakiin halista uma lihid inaad qof uun iibsato Tani waa sababta ay tahay inaad marwalba wax iibsato sharci ah MK-2866 ka soo saaraha caanka ah iyo iibiyaha caymiska, ugu nadiifsan, ugu fiican, iyo sharciyeysan SARMs sida Shaybaarada jirka lagu dhiso. Tani waxay kaa caawin doontaa inaad hesho nabada maskaxda oo dhameystiran oo aad kaliya ka iibsaneyso Ostarine dhab ah iibiyaha caanka ah ee SARMs. Iibso Ostarine hadda!